(၂၄. ၃.၂၀၂၀)ရက်နေ့မှာ တရော်ကင်ပွန်းနဲ့ ခေါင်းလျှော်ဖို့ မမေ့နဲ့နော် - Shweman
ဘုန်းကျက်သရေ လာဘ်ပွင့်် ဦးခေါင်းမင်္ဂလာ ပြုရအောင်အားလုံးမင်္ဂလာပါအနယ်နယ်အရပ်ရပ်မှ ချစ်ခင်လေးစာကြသော မိသားစုဆွေမျိုး မိတ်သင်္ဂဟ အပေါင်းတို့ခင်ဗျာ …။
နှစ်ကတကြိမ်ရေးသားထားသလို မြန်မာနှစ်ရဲ့ပထမလ ဖြစ်တဲ့တန်းခူးလဆန်း၁ရက်နေ့မှာ ဦးခေါင်းဆေးမင်္ဂလာ ပြုပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ် …။
ရှေးဆို ရိုးစကားလေးနဲ့အညီ ဆန်းရက်၁ရက်မှာ ဦးခေါင်ဆေးရင် ဘုန်းကျက်သရေမဂ်လာ တိုးပွားပြီ လာဘ်ပွင့်ခြင်း ကံကောင်းခြင်းမင်္ဂလာအဖြာဖြာတွေတိုးပွားကြခြင်းအန္တရာယ် ကင်းခြင်းဆိုသည့်အတိုင်းယခု တန်ခူးလဆန်း၁ရက်နေ့ ၂၄.၃.၂၀၂၀ရက်နေ့ပဲ ဖြစ်ပါတယ် …။
အဲ့ဒီနေ့မှာ နေ့လည်၂နာရီမှ ညနေ၅နာရီ အချိန်တွေမှာမြန်မာ့ရိုးရာတရော်ကင်းပွန်း ရည်စစ်စစ်ထဲကို ကွမ်းရွက်၃ရွက် ခြေထည့်ပါ …။
သပြေ၃ညွန့်ထည့်ပြီ မိမိတို့ဂြိုလ်ခွင်အလိုက်လာဘ်နေအရပ်ကို မျက်နှာမူပြီ ဦးခေါင်းဆေးမဂ်လာပြုပေးရပါမည် ဦးခေါင်ဆေး မင်္ဂလာပြုချိန်မှာ ဖိနပ်ချွတ်ပြီးလာဘ်နေ အရပ်တွေကိုမျက်နှာမူကာ မိမိစိတ်ထဲမှ သရဏဂုံ ရွတ်ဖတ်ခြင်း ပဌာန်းအကျဉ်း၃ ခေါက်ရွတ်ဖတ်ပြီးပါက ဦးခေါင်ဆေးမင်္ဂလာ ပြုလုပ်ရပါမယ် …။
နေ့နံသား သမီးများလာဘ် နေရမည့်အရပ်များမှာ တနင်္ဂနွေ မွေးသူများ မြောက်အရပ် ၊ တနင်္လာမွေးသူများ အရှေ့တောင်အရပ် ၊ အင်္ဂါမွေးသူများ အနောက်အရပ် ၊ ဗုဒ္ဓဟူးမွေးသူများ အရှေ့အရပ် ၊ကြာသာပတေးမွေးသူများ တောင်အရပ် ၊သောကြာမွေးသူများ အရှေ့မြောက်အရပ် ၊ စနေမွေးသူများ အနောက်မြောက်အရပ် တို့ ဖြစ်ကြပါတယ် …။
မိမိတို့အနေနဲ့ တရော်ကင်းပွန်းစစ်ကိုသာ မြန်မာ့ရိုးရာထုံစံအတိုင်း ဝယ်ယူပြီ ခေါင်လျှော်ရပါမည် ။ ယခုခေါတ်ပေါ်နေသော ခေါင်လျှော် ရည်များနှင့် အလွယ်တကူ လျှော်ခြင်းမရပါ …။
ယုံကြည်စွာ ဦးခေါင်ဆေးမင်္ဂလာ ပြုသူတို့မှာ ဘုန်းကံမြင့်တက်လာခြင်း၊ ကံမြင့်တက်လာခြင်း၊ အကြံအစည်ထမြောက်အောင် မြင်လာခြင်း၊ လာဘ်လာဘက ပေါများလာ နိုင်ခြင်း၊ အန္တရာယ်ကင်းခြင်း ရောဂါဘယကင်းဝေးခြင်းဆိုသည့် မင်္ဂလာအဖြာဖြာတွေ ရရှိခံစားနိုင်စေဖို့ဆိုတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးများ ထူးလာနိုင်ပါတယ် ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကို တင်ပြပေးလိုက်ရပါတယ် …။ ။
(၂၄. ၃.၂၀၂၀)ရကျနမှေ့ာ တရျောကငျပှနျးနဲ့ ခေါငျးလြှျောဖို့ မမနေဲ့နျော
ဘုနျးကကျြသရေ လာဘျပှငျ့ ဦးခေါငျးမင်ျဂလာ ပွုရအောငျအားလုံးမင်ျဂလာပါအနယျနယျအရပျရပျမှ ခဈြခငျလေးစာကွသော မိသားစုဆှမြေိုး မိတျသင်ျဂဟ အပေါငျးတို့ခငျဗြာ …။
နှဈကတကွိမျရေးသားထားသလို မွနျမာနှဈရဲ့ပထမလ ဖွဈတဲ့တနျးခူးလဆနျး၁ရကျနမှေ့ာ ဦးခေါငျးဆေးမင်ျဂလာ ပွုပေးရမှာ ဖွဈပါတယျ …။
ရှေးဆို ရိုးစကားလေးနဲ့အညီ ဆနျးရကျ၁ရကျမှာ ဦးခေါငျဆေးရငျ ဘုနျးကကျြသရမေဂျလာ တိုးပှားပွီ လာဘျပှငျ့ခွငျး ကံကောငျးခွငျးမင်ျဂလာအဖွာဖွာတှတေိုးပှားကွခွငျးအန်တရာယျ ကငျးခွငျးဆိုသညျ့အတိုငျးယခု တနျခူးလဆနျး၁ရကျနေ့ ၂၄.၃.၂၀၂ဝရကျနပေဲ့ ဖွဈပါတယျ …။
အဲ့ဒီနမှေ့ာ နလေ့ညျ၂နာရီမှ ညနေ၅နာရီ အခြိနျတှမှောမွနျမာ့ရိုးရာတရျောကငျးပှနျး ရညျစဈစဈထဲကို ကှမျးရှကျ၃ရှကျ ခွထေညျ့ပါ …။
သပွေ၃ညှနျ့ထညျ့ပွီ မိမိတို့ဂွိုလျခှငျအလိုကျလာဘျနအေရပျကို မကျြနှာမူပွီ ဦးခေါငျးဆေးမဂျလာပွုပေးရပါမညျ ဦးခေါငျဆေး မင်ျဂလာပွုခြိနျမှာ ဖိနပျခြှတျပွီးလာဘျနေ အရပျတှကေိုမကျြနှာမူကာ မိမိစိတျထဲမှ သရဏဂုံ ရှတျဖတျခွငျး ပဌာနျးအကဉျြး၃ ခေါကျရှတျဖတျပွီးပါက ဦးခေါငျဆေးမင်ျဂလာ ပွုလုပျရပါမယျ …။
နနေံ့သား သမီးမြားလာဘျ နရေမညျ့အရပျမြားမှာ တနင်ျဂနှေ မှေးသူမြား မွောကျအရပျ ၊ တနင်ျလာမှေးသူမြား အရှတေ့ောငျအရပျ ၊ အင်ျဂါမှေးသူမြား အနောကျအရပျ ၊ ဗုဒ်ဓဟူးမှေးသူမြား အရှအေ့ရပျ ၊ကွာသာပတေးမှေးသူမြား တောငျအရပျ ၊သောကွာမှေးသူမြား အရှမွေ့ောကျအရပျ ၊ စနမှေေးသူမြား အနောကျမွောကျအရပျ တို့ ဖွဈကွပါတယျ …။
မိမိတို့အနနေဲ့ တရျောကငျးပှနျးစဈကိုသာ မွနျမာ့ရိုးရာထုံစံအတိုငျး ဝယျယူပွီ ခေါငျလြှျောရပါမညျ ။ ယခုခေါတျပျေါနသေော ခေါငျလြှျော ရညျမြားနှငျ့ အလှယျတကူ လြှျောခွငျးမရပါ …။
ယုံကွညျစှာ ဦးခေါငျဆေးမင်ျဂလာ ပွုသူတို့မှာ ဘုနျးကံမွငျ့တကျလာခွငျး၊ ကံမွငျ့တကျလာခွငျး၊ အကွံအစညျထမွောကျအောငျ မွငျလာခွငျး၊ လာဘျလာဘက ပေါမြားလာ နိုငျခွငျး၊ အန်တရာယျကငျးခွငျး ရောဂါဘယကငျးဝေးခွငျးဆိုသညျ့ မင်ျဂလာအဖွာဖွာတှေ ရရှိခံစားနိုငျစဖေို့ဆိုတဲ့ အကြိုးကြေးဇူးမြား ထူးလာနိုငျပါတယျ ဆိုတဲ့အကွောငျးလေးကို တငျပွပေးလိုကျရပါတယျ …။ ။
Covid 19 virous ကာကွယ်ရေး Auto ဆေးဖျန်းစနစ် မုံရွာနည်းပညာကျောင်းသား ၄ ဦးတီထွင်နေ